Leviticus 24 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ngo a wɔde begu nkanea a ɛwɔ ɔsom ntamadan no mu (1-4)
Paanoo a wɔde kyerɛ (5-9)
Wosiw nea ɔkaa Onyankopɔn din ho abususɛm no abo (10-23)
24 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo no na wɔmma wo ngo kurennyenn a efi ngodua mu; ɛno na wɔde begu nkanea no mu sɛnea ɛbɛyɛ a ebesi so daa a ɛrennum.+ 3 Nkanea a esisi ahyiae ntamadan no mu wɔ ntwamutam a ɛsɛn baabi a Adanse Adaka no wɔ akyi no, Aaron nhwɛ mma wɔnsɔ, na ɔnhwɛ sɛ daa ebesi so afi anwummere akosi anɔpa wɔ Yehowa anim. Ɛyɛ ahyɛde a mubedi so daa wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 4 Kaneadua+ a wɔde sika kɔkɔɔ amapa ayɛ no, ɔnhwɛ sɛ ɛso nkanea no bɛyɛ adwuma daa wɔ Yehowa anim. 5 “Fa esiam muhumuhu tõ paanoo 12 a wɔayɛ no sɛ nkawa. Fa esiam efa nkyem du mu abien* tõ paanoo no biara. 6 Yɛ no akuw abien wɔ sika kɔkɔɔ pon no so wɔ Yehowa anim;+ fa asia toto so wɔ ɔfã ha, na fa asia nso toto so wɔ ɔfã ha.+ 7 Fa ɛhyɛ* papa gu kuw biara so, na ebegyina hɔ* ama afɔre a wɔde paanoo rebɔ no,+ na ɛbɛyɛ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa. 8 Homeda biara ɔmfa mmesi Yehowa anim.+ Ɛyɛ apam a me ne Israelfo ayɛ de kosi daa. 9 Ɛbɛyɛ Aaron ne ne mma dea,+ na ma wonni wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron,+ efisɛ ɛyɛ ade kronkron paa a efi afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa no mu. Ɛyɛ ahyɛde a ɛbɛtena hɔ daa.” 10 Ná Israelni bea bi wɔ ɔbabarima wɔ Israelfo mu a ne papa yɛ Egyptni.+ Bere bi, saa aberante no ne Israelni barima bi koe wɔ asoɛe hɔ. 11 Aberante a ne maame yɛ Israelni yi fii ase domee dinkɛse no,*+ na ɔkaa ho abususɛm. Enti wɔde no brɛɛ Mose.+ Ná ne maame no din de Selomit, na na ɔyɛ Dibri a ofi Dan abusuakuw mu no babea. 12 Wɔde aberante no too dan mu twɛn gyinae a Yehowa besi wɔ asɛm no ho.+ 13 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 14 “Fa nea ɔdomee me din no bra asoɛe no akyi. Afei wɔn a wɔtee nea ɔkae no nyinaa mfa wɔn nsa ngu ne ti so, na asafo no nyinaa nsiw no abo.+ 15 Na ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Obiara a ɔbɛdome ne Nyankopɔn no, wayɛ bɔne na obenya ne bɔne so akatua. 16 Enti nea waka Yehowa din ho abususɛm no, ɛsɛ sɛ wokum no.+ Ɛsɛ sɛ asafo no nyinaa siw no abo. Obiara a ɔbɛkasa atia dinkɛse no, ɔhɔho a wabɛsoɛ mo mu oo, kuromanni oo, wonkum no. 17 “‘Sɛ obi kum onipa* a, ɔno nso ɛsɛ sɛ wokum no.+ 18 Obiara a ɔbɛbɔ afieboa bi ama wawu no,* ɔnhyɛ anan; nkwa nsi nkwa ananmu.* 19 Sɛ obi pira ne yɔnko nipa a, nea ɔde yɛɛ no no, wɔnyɛ ɔno nso bi.+ 20 Nea abu nsi nea abu ananmu, aniwa nsi aniwa ananmu, ɛse nsi ɛse ananmu. Sɛnea opiraa ne yɔnko no, wompira no saa ara.+ 21 Nea obekum aboa no, ɔnhyɛ anan,+ nanso nea obekum onipa de, wonkum no bi.+ 22 “‘Ɔhɔho a wabɛsoɛ mo mu oo, kuromanni oo, mmara baako na ɛwɔ hɔ ma mo nyinaa,+ efisɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn.’” 23 Afei Mose ne Israelfo no kasae, na wɔde nea ɔdomee Onyankopɔn din no baa asoɛe no akyi besiw no abo.+ Enti Israelfo yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no pɛpɛɛpɛ.
^ Efa nkyem du mu abien yɛ lita 4.4. (Bɛyɛ olonka baako ne fã). Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “ɛbɛyɛ nkae ade.”
^ Kyerɛ sɛ, edin Yehowa no, sɛnea nky. 15 ne 16 kyerɛ no.
^ Anaa “Obiara a ɔbɛbɔ aboa bi kra ma wawu no.”
^ Anaa “ɔkra nsi ɔkra ananmu.”